Maxay yihiin Faa'iidooyinka Qalitaanka Qalitaanka Robotka?
Markaad ubaahantahay qalliinka xubinta taranka dumarka xaalad aan fiicnayn, nidaamka da Vinci® ayaa ah kan ugu yar ee ugaarsiga uurjiifka la heli karo. At Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan ku qabanaa hysterectomies dumarka da 'kasta ha lahaadeene. Qalitaanka xubinta taranka dumarka waa qalliin looga soo saarayo makaanka haweeneyda. Intii lagu guda jiray a Qalitaanka mishiinka qalalan ee robotka lagu caawiyo, waxaan u adeegsanaa kumbuyuutar si aan u xakameyno qalabka qalliinka inta lagu jiro qalliinkaaga Columbus, Dublin, ama Westerville, OH. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan si fudud u galno meelaha yaryar iyo inaan aragti fiican ka haysanno qalliinka xitaa qalliinka laparoscopic.
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, dhaqaatiirtayadu waxay kugula talin karaan qalliinkan markaad dhibaato ku hayso ilmo galeenkaaga oo aan ka jawaabin daaweynta kale. Qaar ka mid ah sababaha caadiga ah ee aan kugula talin karno robot-ka hysterectomy waxaa ka mid ah:
Qalliinkan yar-yar ee soo-dhaca ee robot-ka caawiya ayaa gacan ka geysan kara xallinta dhibaatooyinka caafimaadka galmada ee haweenka.
Faa'iidooyin badan ayaa ku jira adeegsiga qalliinka qanjirka 'robotic hysterectomy' ee loo maro habka qalliinka ee caadiga ah, oo ay ku jiraan
Jeexitaan yaryar, oo keena nabarro yar
Markaad rabto inaad waxbadan kabarato noocan ah xubinta taranka dumarka, kadhigo balan xafiiskayaga Columbus, Dublin, ama Westerville, OH.
Qalliinkaaga waxaa badanaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo suuxdinta guud. Tuubo ayaa laga yaabaa in lagaa geliyo cunahaaga si ay suuxintaadu kuu siiso, iyo inay kaa caawiso inaad neefsato inta aad hurudayso. Waxaa laga yaabaa in lagaa geliyo tuubo dhuuban oo lagu rido kaadi-haystaada si ay kaadi kaaga soo daadiso muddada hawsha lagu jiro iyo ka-dib. Waqtiga qalliinka wuxuu socon karaa illaa 3 - 4 saacadood.
Waxaan sameyn doonaa xoogaa yar oo jeexitaan ah oo u dhow badhanka calooshaada. Waxaan calooshaada ku shubi doonnaa gaas si aan u buufinno, sidaa darteed waxaan heysannaa qol badan oo aan ku aragno oo aan ku shaqeyno. Laparoscope ayaa la geliyay calooshaada iyada oo ay la socdaan qalab kale oo qalliin. Dhakhtarkaaga qalliinka ayaa markaa u dhaqaaqaya aagga koontaroolka si uu meel fog uga xakameeyo qalliinkaaga. Ilmo-galeenkaaga ayaa loo jarjarey qaybo yaryar oo si fudud looga soo saari karo meelaha la jeexay. Waxay kuxirantahay sababta makaankaaga kaadi-mareenka, ilmo-galeenka oo dhan waa la soo saari karaa ama kaliya qeybta kore ee makaanka afkiisa. Tuubooyinka ugxansidahaaga iyo ugxansidahaaga ayaa sidoo kale lagaa saari karaa. Qalitaanka ka dib, meelaha lagaa jeexay way xiran yihiin waxaana lagu daboolay faashad yar.
Maxaa dhacaya kadib qalitaanka qalitaanka ee robotka?
Qalliinka ka dib, waxaa lagu geyn doonaa qolka raysashada si loola socdo inta aad ka bogsato suuxdinta. Badanaa, waxaad joogi doontaa cisbitaalka dhowr maalmood. Marka laguu cadeeyo inaad gurigaaga aadeyso, waxaa muhiim ah inaad raacdo dhamaan tilmaamahayaga oo aad ilaaliso balamahaaga dabagalka ah. Meelaha lagaa qalay waa inay ahaadaan kuwo qalalan 2 - 3 maalmood. Ka fogow qaadista culus dhowr toddobaad ama illaa uu dhakhtarkaagu kuu oggolaado. Soo kabashada oo dhammeystiran waxay qaadan kartaa meel kasta dhowr toddobaad illaa dhowr bilood.
Baro wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka yeelashada qanjirka 'robot hysterectomy'
Markaad ubaahantahay qalitaanka xubinta taranka, dhakhaatiirtayada Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay kawada hadli karaan noocyada qalliin ee la heli karo. Waxaan sidoo kale kugula socodsiin karnaa faa iidooyinka ay leedahay in lagaarsado astaamo qallalan oo robot ah. Si aad u ballansatid ballan si aad wax dheeraad ah uga ogaato, call xafiisyadayada Columbus, Dublin, ama Westerville, OH, maanta.